ए...गणेसमानले त त्यसरी पो पढेका रहेछन् - TGuff
ए…गणेसमानले त त्यसरी पो पढेका रहेछन्
Fri Apr90	Comments
कांग्रेस नेता मनमोहन भट्टराईले सुप्रिम लिडर गणेशमान सिंहका बारेमा बताइरहँदा ध्यानबाट भर्खर जागेकाहरु हातले मुख छोपेर सुनिरहेका थिए। भाषण गर्न बानी परेका नेता न परे। दश दिने ध्यान शिविर सकेर बैरमुखी भएका विपश्वीहरु एसएन गोयन्का गुरुजीको स्प्रिच्युल डिस्कोर्स होइन राजनीतिक प्रवचन सुन्दै थिए। दश दिनदेखि थुनिएका मुखहरु खुलेको मै माहोल एक्साइटेड थियो। हामी थियौं नेपाल विपश्यना सेन्टर, मुहानपोखरी बुढानिलकण्ठमा। नेताका अघिपछि कार्यकर्ता होइन ध्यान गर्न गएका लेक्चरर, उद्योगी, आर्मीका रिटायर्ड अफिसर, पत्रकार र विद्यार्थी थिए।
तपाइँ जीवनलाई रंगीन र खुशी राख्न हायत होटलको रक्स बार धाउनुहुन्छ ? रात्री जीवनको मस्ती मार्न एभरेष्टको ग्यालेक्सी डिस्को छिर्नुहुन्छ अथवा दोहोरी र डान्स बारमा टिल्ल भएपछि आधा रातमा हल्लिँदै ठमेल वा ‘किङ्ग्स वे’को प्लाटुनियम पुग्नुहुन्छ ? लाजिम्पाटको रोयल हानाको उफरोमा डुबेर जीवनको चरम आनन्द भोगेको ठान्नुहुन्छ वा ठमेलको हिमालयन जाभाको सोफामा पल्टिएर ‘ब्लडी मोक्का’ तान्दै बुद्धिविलासको दैनिकी गुजार्नुहुन्छ ? पैसामा मस्ती साट्न खोलिएका यस्ता जक्सनहरुले हामीलाई व्यस्त जीवनबाट एकैछिन् फुर्सदिलो हुँदा कथित खुशी र शान्तिको एक चोक्टा दिइरहेका छन्। रातभरिको खुशीको झोँक्का बिहान भइसक्दा उत्रिएर टाउको दुखाइमा परिणत हुन्छ। अब के गर्ने ? सुनौँ कुनै बेलाका (अल्कोहलिक?) थिंकर एवं कांग्रेसका उनै नेता भट्टराईलाई।
‘रक्सीमा आनन्द खोज्नु जति नै मूर्खता पुस्तकमा जीवन खोज्नु पनि हो। रक्सी पिउनुभन्दा बुक पढ्नु राम्रो। त्यसबाट किताबी ज्ञान प्राप्त हुन्छ। शास्त्रीय चिन्तनले मान्छे बाैद्धिक ज्ञानी बन्छ तर त्यो अनुभव तहसम्म पुग्दैन।’ ए… त्यसो भए किन जोड गर्ने ड्रिङ्क्स, डाङ्डुङ र डिस्कोमा ? काठमाडौंका एलिट र पार्टी एनिमलहरु पनि एक पटक अनुभव गर्ने कि विपश्यनाको ? कान्तिपथको ज्योति भवन पर्खिरहेछ।
LifeStyle %e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%be %e0%a4%97%e0%a4%a3%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%b9 %e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b9%e0%a4%a8-%e0%a4%ad%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%88